Dowladda Soomaaliya oo ku gacan seyrtay Lacag dhan 81-Milyan oo dollar oo ay u soo bandhigeen Sucuudiga iyo Imaaraadka si ay xiriirka ugu jarto Qatar – Radio Dalsan FM 91.5 MHz | Warar Sugan | Somalia News
Dowladda Soomaaliya oo ku gacan seyrtay Lacag dhan 81-Milyan oo dollar oo ay u soo bandhigeen Sucuudiga iyo Imaaraadka si ay xiriirka ugu jarto Qatar
On Aug 30, 2017 Last updated Aug 30, 2017
Wargeyska Gulf Times ayaa maanta qoray inay DFS iska diiday Codsi uga yimid Isbahaysiga Sacuudiga oo ku aadan inay Somalia ka mid noqoto Isbahaysiga Sacuudiga ee go’doominayo dalka Qatar.
Wargeyska waxa uu xusay inay Dowladda Somalia door biday inay garab istaagaan dowladda Qatar, inkastoo aysan DFS si rasmi ah u shaacinin Mowqifkaasi, kuna dhegan tahay Go’aankii Dhexdhexaadnimadda ee ay ka qaatay Khilaafkaasi.
Xiisadda Gacanka Carbeed waxay haatan dhibaataynaysaa dalalka Afrika, kadib, markii ay Dowladda Sacuudiga ay ugu baaqday tiro ka tirsan Dowladaha Afrika oo ay Somalia ku jirto, si ay ugu soo biiraan Xayiraadda Isbahaysiga Sacuudiga ku hayaan dalka Qatar.
Balse, ma jiro Waddan u diyaar garoobay inuu ayido Codsiga uga yimid Dowladda Sacuudiga.
Wargeyska Gulf Times waxa uu xusay inay Dowladaha Imaaraadka iyo Sacuudiga u soo bandhigeen DFS lacag dhan 81-million oo Dollar, si ay ugu soo biirto Go’doominta lagu hayo Qatar..
Si kastaba ha ahaatee, Madaxweynaha Somalia waxauu la barbar noqday Dowladda Qatar, waa sida lagu soo daabacay Wargeyska Gulf Times.
Somalia waxay xiriir wanaagsan la leedahay dalka Qatar oo ay colaadinayaan Sacuudiga, Imaaraadka, Masar iyo Baxrayn.
Isbahaysiga Sacuudiga waxay weli sii wadaan inay DFS ka codsadaan inay xiriirka u jaraan dalka Qatar, inkastoo aysan Somalia u debcin Cadaadiskaasi.
Madaxweyne Farmaajo waxa uu horey ugu baaqay dhamaan Dowladaha khilaafsan inay Wada-xaajood ku xaliyaan Khilaafkodoa.
Wuxuuna u oggolaaday inay Diyaaradaha Qatar soo dul mari karaan Hawada Somalia, kadib, markii ay Isbahaysiga Sacuudiga xayireen inay Diyaaradaha Qatar adeegsadaan Hawadooda.
Wargeyska Gulf Times waxa uu Warbixintiisa ku muujiyey in Tallaabadda ay Somalia samaynayso itaal darro ku tahay cunqabataynta ay Isbahaysiga Sacuudiga ku soo rogeen dalka Qatar bishii June ee la soo dhaafay.
Xiisadda ayaa weli u muuqata mid kacsan, iyadoo Dowladda Imaaraadka doonayso inay galaangal badan ku yeelato Maamul-gobaleedyadda Puntland iyo Somaliland.
Wargeyska Gulf Times waxa uu tilmaamay inay Dowladda Imaaraadka ku tala-jirto sidii ay Saldhig Milliteri ugu yeelan lahaayeen Somalia, gaar ahaan Somaliland iyo Puntland oo ay ka dhisayaan Dekedo Casri ah, sida tan Berbera iyo Bosaaso.
Dhageyso:-Galmudug oo jawaab ka bixisay hadal ka soo yeeray Puntland
Akhriso:-Amar ka soo baxay Wasaaradda Gaadiidka Galmudug